သီးပငျစားပငျတှကေို ရာသီခြိနျမဟုတျပဲ သီးလာအောငျ လုပျနညျး – Daily Feed MM
Admin_John | November 26, 2020 | Lifestyle | No Comments
မင်ျဂလာပါ။ Page ကို အမွဲအားပေးနတေဲ့ မိတျဆှတှေေ အတှကျ သီးပငျစားပငျတှကေို ရာသီခြိနျမဟုတျဘဲ အသီးသီးစတေဲ့ နညျးလေးကို ဖျောပွလိုကျပါတယျနျော…. ကွကျဥဟိုမုနျးဆေးရညျလုပျနညျး…ကွကျဥအခှံရော အသားပါ
၁ ပိသာ။သကွား ၁ ပိသာ။နှားနို့ ၁ ပုလငျးခှဲ။ပုဇှနျခွောကျ ၃၀ သား။ အုနျစိမျးအရညျ ၂ ပုလငျး။ ဆနျဆေးရညျ ၂ ပုလငျး။ အုနျးနို့၁ ပုလငျးခှဲ။ ပဲစေ့ အညှောကျပေါကျစ အစိတျသား။ ပဲစအေ့ညှောကျပေါကျစဆိုတာကတော့ ပဲတီ
စိမျးကို ရစေိမျးပွီးအဝတျနဲ့ထုတျလားလိုကျရငျ နာရီ ၂၀ လောကျအကွာမှာ အညှောကျပေါကျစ ပဲစကေို့ ရပါလိမျ့မယျ။မုံလာဥ ၅၀ သား။ အဲ့ဒါတှေ အားလုံးကို ဖြျောရညျကွိတျစကျနဲ့ ကွိတျခလြေို့ပဲဖွဈဖွဈထောငျးခွပွေီးတော့ဖွဈဖွဈ
ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ ကွိတျစကျနဲ့ကွိတျတဲ့အခါမှာ ရကေို မသုံးပဲအုနျးရညျ၊ နို့ရညျ၊ ဆနျဆေးရတှေကေို ရောပွီးကွိတျယူပါ။ အခြို့မှုနျ့က ၁၀ သား။ဂလူးကိုဈ့မှုနျ့က ၁၀ သား။ ဟူးမဈလို့ချေါတဲ့ ကြောကျမီးသှေးနဲ့ဖနျရညျအမှုနျ့ရေ
ာကြိုထားတဲ့ဆေးမှုနျ့က အစိတျသား၊(ဝယျလို့မရရငျမထညျ့လညျးရတယျ။ သူက မိုလီကှနျးတှကေိုအနုစိတျဖွဈပွီးပြျောဝငျမှုအား ကောငျးအောငျလုပျပေးတာဖွဈပါတယျ။)အဲ့ဒါတှေ အားလုံးကို ပုံးတဈပုံးမှာ ထညျ့ပွီး ၃ လသိပျထား
လိုကျပါ။ ၆ လဆိုရငျပိုကောငျးတယျ၊1 နှဈအကွာဆိုရငျ ပိုပွီးကောငျးပါတယျ။ အမြားနဲ့လုပျမယျဆိုရငျတော့ တဈမြိုးကို တဈပုံးဆီခှဲလုပျထားပွီားကျမှလာရောသုံးတာကပိုကောငျးပါတယျ။အခြိုးအစားကတော့ ၃ ခြိုးတဈခြိုးဖွဈပါတယျ။
ပွောခဲ့တဲ့ အရာတှကေ ၃ ဆဆိုရငျ သကွားက တဈဆ ဖွဈပါတယျ။ ကွကျဉကတော့ တဈဆစီဖွဈပါတယျ။ ကွကျဉတဈဆကို အခြိုကတဈဆနဲ့ပုံးထဲမှာသိပျ ထားရမှာဖွဈပါတယျ။ မွကွေီး (အပငျရငျး)တှငျ ပကျဖနျြးရနျ ကွကျဥ
ဟျောမုနျးဆေးရညျ ၁ လီတာ ကို ရလေီတာ ၂၀၀ နှငျ့ပကျဖနျြးရနျ။ (၁၅ရကျတဈခါ) အရှကျကိုပကျဖနျြးရနျ ကွကျဥဟျောမုနျးဆေးရညျ ၃၀၀ စီစီ ကိုရလေီတာ ၂၀၀ နှငျ့ ပကျဖနျြးရနျ။ (၁၀ ရကျ တဈခါ)
Source ; Win Myint IQwin Farm
မင်္ဂလာပါ။ Page ကို အမြဲအားပေးနေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ အတွက် သီးပင်စားပင်တွေကို ရာသီချိန်မဟုတ်ဘဲ အသီးသီးစေတဲ့ နည်းလေးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော်…. ကြက်ဥဟိုမုန်းဆေးရည်လုပ်နည်း…ကြက်ဥအခွံရော အသားပါ
၁ ပိသာ။သကြား ၁ ပိသာ။နွားနို့ ၁ ပုလင်းခွဲ။ပုဇွန်ခြောက် ၃၀ သား။ အုန်စိမ်းအရည် ၂ ပုလင်း။ ဆန်ဆေးရည် ၂ ပုလင်း။ အုန်းနို့၁ ပုလင်းခွဲ။ ပဲစေ့ အညှောက်ပေါက်စ အစိတ်သား။ ပဲစေ့အညှောက်ပေါက်စဆိုတာကတော့ ပဲတီ
စိမ်းကို ရေစိမ်းပြီးအဝတ်နဲ့ထုတ်လားလိုက်ရင် နာရီ ၂၀ လောက်အကြာမှာ အညှောက်ပေါက်စ ပဲစေ့ကို ရပါလိမ့်မယ်။မုံလာဥ ၅၀ သား။ အဲ့ဒါတွေ အားလုံးကို ဖျော်ရည်ကြိတ်စက်နဲ့ ကြိတ်ချေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်းခြေပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်
ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကြိတ်စက်နဲ့ကြိတ်တဲ့အခါမှာ ရေကို မသုံးပဲအုန်းရည်၊ နို့ရည်၊ ဆန်ဆေးရေတွေကို ရောပြီးကြိတ်ယူပါ။ အချို့မှုန့်က ၁၀ သား။ဂလူးကိုစ့်မှုန့်က ၁၀ သား။ ဟူးမစ်လို့ခေါ်တဲ့ ကျောက်မီးသွေးနဲ့ဖန်ရည်အမှုန့်ရေ
ာကျိုထားတဲ့ဆေးမှုန့်က အစိတ်သား၊(ဝယ်လို့မရရင်မထည့်လည်းရတယ်။ သူက မိုလီကွန်းတွေကိုအနုစိတ်ဖြစ်ပြီးပျော်ဝင်မှုအား ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။)အဲ့ဒါတွေ အားလုံးကို ပုံးတစ်ပုံးမှာ ထည့်ပြီး ၃ လသိပ်ထား
လိုက်ပါ။ ၆ လဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်၊1 နှစ်အကြာဆိုရင် ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။ အများနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးကို တစ်ပုံးဆီခွဲလုပ်ထားပြီားက်မှလာရောသုံးတာကပိုကောင်းပါတယ်။အချိုးအစားကတော့ ၃ ချိုးတစ်ချိုးဖြစ်ပါတယ်။
ပြောခဲ့တဲ့ အရာတွေက ၃ ဆဆိုရင် သကြားက တစ်ဆ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်ဉကတော့ တစ်ဆစီဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်ဉတစ်ဆကို အချိုကတစ်ဆနဲ့ပုံးထဲမှာသိပ် ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြေကြီး (အပင်ရင်း)တွင် ပက်ဖျန်းရန် ကြက်ဥ
ဟော်မုန်းဆေးရည် ၁ လီတာ ကို ရေလီတာ ၂၀၀ နှင့်ပက်ဖျန်းရန်။ (၁၅ရက်တစ်ခါ) အရွက်ကိုပက်ဖျန်းရန် ကြက်ဥဟော်မုန်းဆေးရည် ၃၀၀ စီစီ ကိုရေလီတာ ၂၀၀ နှင့် ပက်ဖျန်းရန်။ (၁၀ ရက် တစ်ခါ)